Madaxweynaha Aljeeriya oo qaadacay codsigii Shacabkiisa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha Aljeeriya oo qaadacay codsigii Shacabkiisa
Madaxweynaha Aljeeriya oo qaadacay codsigii Shacabkiisa
Madaxweynaha Aljeeriya Cabdicasiis Boutaflika ayaa sheegay inuu markii 5aad u sharaxan yahay doorashada Madaxweynaha xili ay dalkiisa ka socdaan banaanbaxyo balaaran oo loog soo horjeedo inuu xilka kusoo noqdo hogaamiyahaasi waayeelka ah.
Go’aankan ayaa waxa ku dhawaaqay Afhayeenka iyo Guddoomiyaha guddiga ololaha Doorashada ee Madaxweynaha, Abdelghani Zaalane oo sheegay in Boutaflika diyaar u yahay inuu xilka markale qabto.
Boutaflika oo ah 82 sano jir ayaa sanadihii lasoo dhaafay xanuunsanaa waxaana inta bada awooda maamulka gacanta ku haya siyaasiyiinta tujaarta ah iyo militariga dalkaasi oo weli doonaya inuu xilka siihayo.
Asbuucii lasoo dhaafay ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi ay banaanbaxyadii ugu balaarnaa ka dhaceen magaalooyinka waaweyn, shacabka ayaa doonayey inuusan Madaxweynaha markale isu taagin doorashada sanadkan.
Cabdicasiis Boutaflika ayaa xilka qabtay sanadkii 1999kii, wuxuuna muddooyinkii danbe la jiifay xanuun dhanka wadnaha ah.